Izinto Ezinokonwatyelwa Kwa-Airbnb: Buka Iindwendwe Kwinto Enokonwatyelwa Kwi-intanethi
IZINTO ONOKUZONWABELA KWA-AIRBNB
Buka iindwendwe ngento enokonwatyelwa kwi-intanethi
Joyina intsapho yababuki zindwendwe esondeza ihlabathi ngendlela entsha.
Izinto Ezinokonwatyelwa Zakwa-Airbnb zizinto ezimnandi ezinokwenziwa eziyilwa zize zikhokelwe ngababuki zindwendwe basekuhlaleni ezikodlula lee ukubuka iindawo neeklasi. Kwaye ngoku unokuba ngumbuki zindwendwe wazo kuye nabani na, nokuba uphi na.
Buka iindwendwe usekhaya
Yabelana ngobuchule bakho uze ukrobise abanye kubomi bakho.
Dibana neendwendwe zasemhlabeni wonke
Yenza umhlaba ube ngathi mncinci uze ube nobubele ngakumbi.
Zenzele imali ngokwenza into oyithandayo uxhaswa nguAirbnb.
Ukuba sele unguye umbuki zindwendwe wento enokonwatyelwa, siyakwamkela kwakhona! Ukuze uqalise ukubuka iindwendwe kwi-intanethi, kuza kufuneka wenze into enokonwatyelwa entsha uze uyifake ukuze ihlolwe usebenzisa le nkqubo ingezantsi.
Ceba into yakho enokonwatyelwa
Zonke izinto ezinokonwatyelwa ziqala ngemigangatho yethu ephezulu—ubuchule, ukufikeleleka nonxibelelwano. Kodwa cinga nangendlela yokunxibelelana neendwendwe kwi-intanethi uze unciphise izinto ezinokuzidinga ukuze zikwazi ukuba nenxaxheba. Xa unento oyicebayo, qala inkqubo yokuyifaka.
Yabelana ngento ocinga ukuyenza
Okulandelayo, kuza kufuneka ucacise into yakho eyenziwayo kwi-app nakwiwebhusayithi yento enokonwatyelwa yexesha elizayo. Sicebisa ukuba uchaze iinkcukacha zento oyenzayo, uqale ngexabiso eliphantsi ude ufumane izimvo uze wenze ubude bayo ibe yimizuzu eyi-90 nangaphantsi.
Faka into yakho enokonwatyelwa
Sowuza kuphumelela! Xa ufika kwinyathelo elithi Indawo, cofa indawo ethi Ewe, le yinto enokonwatyelwa ekwi-intanethi. Xa yonke into igqityiwe, ungayifaka. Iqela lethu liza kuyifunda ibe uza kwaziswa ukuba yamkelwe na kwiiveki eziyi-2 ukuya kweziyi-4.
Lungiselela uze uqalise ukubuka iindwendwe
Ngoxa usalindile, khetha indawo echaza wena nento oyenzayo uze uqalise ukuceba indlela eza kuma ngayo ikhamera, izibane nesandisi-lizwi. Ungaqalisa nokufunda ngejelo lokuba nentlanganiso, uZoom. Ungabi naxhala, ngaphambi kokuba uqalise ukubuka iindwendwe siza kwabelana nawe ngezinto eziza kukunceda ukwazi ukuphumelela.
Qalisa ukufaka into yakho enokonwatyelwa
Indlela ababuki zindwendwe ababonisa ngayo ngobomi babo
Aba babuki zindwendwe beza nomoya wokwenza into enokonwatyelwa kwiskrini ngokwenza izinto zamaqela amancinci esinokuzenza kunye ngoxa singekho kunye.
Ixesha Lokucingisisa Neegusha
Ukucinga kakuhle kwifama yaseScotland kunye nokubona abahlobo abanoboya.
Yiya kwinto onokuyonwabela
Ukuzonwabisa Ngokubhaka Njentsapho
Ixesha elimnandi ekhitshini kubantwana nabantu abadala eliphela kukho amaqhebengwana amnandi aphuma eovenini.
Itheko elikwayiklasi yeengcali, iindwendwe zifunda ngengqondo yokwenza umlingo nezinto zomlingo ezinokuzenza ekhaya.
Veza zonke Izinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi
Awuwedwa—uza kukwazi ukufikelela kwizinto eziza kukufundisa namathuba okukunceda ukhule njengombuki zindwendwe nosomashishini osaqalayo.
Izikhokelo, amacebiso nezinye iindlela zokubuka iindwendwe ngokuphumelelayo kwizinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi.
Funda ukuba nobuchule bokubuka iindwendwe, kwi-intanethi nangezinye iindlela.
Qhakamshelana nabanye ababuki zindwendwe kumaqela okanye iindawo zokudibana zikaFacebook.
Ndingayivula njani iakhawunti?
Xa uyifaka uza kusebenzisa ifomu efana neyezinye izinto ezinokonwatyelwa. Xa ufika kwinyathelo elithi Indawo, cofa kwibhokisi ethi Ewe, le yinto enokonwatyelwa ekwi-intanethi. Iqela lethu liza kuhlola into oyithumeleyo ngokukhawuleza ibe uza kwaziswa ukuba yamkelwe na kwiiveki eziyi-2 ukuya kweziyi-4.
Yintoni eyahlukileyo ngokuba ngumbuki zindwende wento enokonwatyelwa kwi-intanethi?
Ezona zinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi ezinomtsalane neziquka wonke umntu zifuna nje iyure eyi-1 ukuya kweziyi-2 nezinto ezimbalwa ukuze uthathe inxaxheba. Iindleko zamava akwi-Intanethi nazo ziphantsi kakhulu kuneendleko zokubamba umntu ngaphakathi, ngoko amaxabiso akho kufuneka abonakalise oku. Ikwafuna nekhamera kunye neintanethi enamandla ukuze ikwazi ukumanyelwa nokubonakala ividiyo yento yakho enokonwatyelwa xa uyenza.
Ndiza kuyenza njani ibonakale kwi-intanethi into yam enokonwatyelwa?
Uza kusebenzisa ijelo ekuthiwa nguZoom elivumela zonke iindwendwe zakho ukuba zijoyine ngexesha elinye, zikwazi ukumanyelwa nokuba nevidiyo ukuze wonke umntu athathe inxaxheba ibe inazo nezinye izinto ezikunceda ubuke iindwendwe. Xa into yakho enokonwatyelwa kwi-intanethi yamkelwe, uza kufumana isimemo sokuvula iakhawunti kaZoom yasimahla. Emva kokuvula iakhawunti, hlola ukuba i-intanethi yakho iyasebenza ngokujoyina intlanganiso yokuvavanya uze uziqhelanise nendlela esebenza ngayo.
Kanye njengezi ziqhelekileyo, izinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi zazisa iindwendwe kubabuki zindwendwe abazingcali, ziyindlela yokudibana nokwenza izinto nabantu abatsha ibe ziyinto enokwenziwa ukude ngabantu abahlaliswe bodwa okanye abahleli ekhaya. Abantu banokujoyina izinto ezinokonwatyelwa ezikwi-intanethi besekhaya okanye naphi na emhlabeni—badinga nje ukuba neintanethi. Akukho mfuneko yokuba babe kwindawo ethile okanye baze nezinto ezininzi ukuze bathathe inxaxheba.
Funda okungakumbi ngokubuka iindwendwe Ngezinto Ezinokonwatyelwa kwa-Airbnb